hataru/हटारु: नयाँ वर्षमा करोडभन्दा बढी एसएमएस
साथीभाइले 'विस' गर्छन्। आफूले पनि 'विस' गhयो। बस् यत्तिमै। सकिन्छ मेरो नयाँ वर्ष। जन्म दिन त अहिलेसम्म मनाएकै छैन।
चिठी संस्कृतिलाई फोन र एसएमएसले विस्थापित गरेपछि चिठी अब चराको दूध भइसक्यो। साइबर पुस्तालाई चिठी के हो? भनेर बुझाउन कठिन छ। हिजो गयो, २०६७ । नयाँ वर्ष सुरु भएछ। के के भए नयाँ वर्षमा? अरु त थाहा भएन तर, एसएमएस भने खुबै गरेछन्। कान्तिपुरले यसको हिसाबकिताब निकालेको रहेछ। त्यही हिसाबकिताब यहाँ राखेँ है।
योगेश खतिवडा, काठमाडौ, वैशाख २ - नया वर्षको शुभ कामना
आदान प्रदान गर्न एक करोडभन्दा बढी एसएमएस आदान प्रदान भएका छन् । नेपाल टेलिकमका जिएसएम उपभोक्ताले बिहीबार मात्र ५० लाखभन्दा बढी एसएमएस आदानप्रदान गरेका छन् । बुधबार पनि टेलिकमका उपभोक्ताले सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै ३० लाख एसएमएस पठाएका थिए । यसअनुसार शुभकामना सन्देश पठाउन मात्रै टेलिकमका उपभोक्ताले दुई दिनमा १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । सामान्य अवस्थामा दैनिक १२ लाखको औसतमा सन्देश आदानप्रदान हुन्छ ।
बिहीबार टेलिकमका एक उपभोक्ताले औसतमा एक एसएमएस पठाएका छन् । टेलिकमका हाल ४७ लाख जिएसएम प्रयोगकर्ता छन् । अन्य कम्पनीका उपभोक्ताले पनि औसतमा एउटा सन्देश पठाउँदा बिहीबार मात्र १ करोड एसएमएस आदानप्रदान भएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार टेलिकम, एनसेल र युटिएलका कुल मोबाइल प्रयोगकर्ता १ करोड ४१ हजार छन् ।
टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेका अनुसार नयाँ वर्षको अघिल्लो दिन बुधबार करिब ३० लाख एसएमएस पठाइएको छ । नयाँ वर्षको पहिलो दिन बिहीबार साँझ ४ बजेसम्म ४६ लाख एसएमएस आदानप्रदान भएको छ । राति अबेरसम्म यो संख्या ५० लाख नाघ्ने उनको भनाइ छ ।
बिहीबार पठाइएको सन्देश सामान्य अवस्थामा हुने सन्देश आदानप्रदानभन्दा चार गुणा बढी हो । 'शुभकामना आदानप्रदान भएकाले एकै दिन एसएमएसको संख्या उच्च दरले बढेको हो,' थिकेले भने । उनका अनुसार बुधबार पठाइएको सन्देश अन्य बेलाको भन्दा अढाइ गुणा र बिहीबारको सन्देश अन्य बेलाको भन्दा चार गुणा बढी हो ।
टेलिकमका उपभोक्ताले हाल एउटा सन्देश पठाएको १ रुपैयाँ शुल्क र अन्य करसहित करिब १ रुपैयाँ २५ पैसा तिर्नुपर्छ । यस आधारमा उपभोक्ताले दुई दिनमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पैसा खर्च गरेका छन् ।
सबै कम्पनीको उपभोक्ताको खर्च पनि जोड्ने हो भने दुई दिनमा २ करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । उपभोक्ताले भ्यालेन्टाइन डे, दसैं तिहार, नेपाली नयाँ वर्ष, अंग्रेजी नयाँ वर्ष, नेपालका अन्य नयाँ वर्षजस्ता समयमा धेरै एसएमएस पठाउँछन् ।
'एकैपटक धेरै एसएमएस पठाइने भए पनि समस्या आउँदैन,' थिकेले भने, 'एसएमएसको भिन्दै बाटो हुने भएकाले असर नदेखिएको हो ।' एसएमएस पठाउँदा अर्कोमा जान ढिला भएको गुनासो उपभोक्तबाट नआएको उनले बताए । तर उपभोक्ताले भने पठाएको धेरै समयपछि जाने समस्या भोगेको गुनासो गरेका छन् ।
मोबाइल उपभोक्ताको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै एसएमएस पठाउने बानी बढेकाले पनि संख्या बढेको हो । विकासित मुलुकमा भ्वाइस (फोन गर्ने) भन्दा डाटा -एसएमएस र इन्टरनेटको प्रयोग) मा धेरै आकषिर्त भएको अवस्थामा नेपाली पनि एसएमएसलाई सन्देश प्रवाहको सहज माध्यमका रूपमा लिने थालेका छन् ।
यसो त एसएमएस पठाउनेको संख्या विश्वव्यापी रूपमै बढेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियनका अनुसार विश्वभरका मोबाइल प्रयोगकर्ताले सन् २०१० मा प्रतिसेकेन्ड २० लाख एसएमएस पठाए, जुन २००७ को भन्दा तीन गुणा बढी हो ।
Nabin Lochan Magar
ho dai tara rolpali hunuma hamilai garba 6